– नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राजमोले तत्कालका विषयहरूमा कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूसित कार्यगत एकता गर्ने गरेको छ । कार्यगत एकता भनेको सिद्धान्त, राजनीति र दर्शन नमिल्नेसँग पनि हुन सक्छ । विगतमा महाकाली सन्धिका बारेमा राप्रपासित राजमोको कार्यगत एकता भएको थियो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध २०४६ सालमा र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि २०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कार्यगत एकता भएको थियो । कार्यगत एकता र पार्टी एकता एउटै विषय होइन । कतिपय मानिसहरूले सहकार्य र तालमेललाई पनि पार्टी एकताको रूपमा बुझ्ने गर्छन । तर त्यो सही होइन ।
यस पटक केन्द्र र प्रदेशको चुनावमा एकातिर, माओवादी केन्द्र र एमालेको “वाम” गठवन्धन बन्यो भने अर्कातिर, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा विभिन्न दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसित तालमेल र पार्टी एकीकरणसम्म हुँदै गई रहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा भएको गठबन्धनमा अहिले चुनावी गठबन्धन गर्ने र भविष्यमा पार्टी एकता गर्नेसम्म घोषणा गरेका छन् । तर हाम्रो पार्टी त्यसरी पार्टी नै एकता गर्ने गरी “वाम गठबन्धन” मा सामेल भएको होइन । हाम्रो पार्टीले अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग गरेको तालमेल चुनावी तालमेल मात्र हो ।
० चुनावी तालमेलसम्बन्धी खास कस्तो सहमति भएको हो त ? अलि प्रष्ट पारी दिनु होस् न ।
–आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्युठान र बागलुङ दुई वटा जिल्लाका लागि मात्र “वाम गठबन्धन”सँग राजमोले चुनावी तालमेल गरेको हो । पहिलो चरण अन्तर्गत आउँदो मङसिर १० मा बागलुङ जिल्लामा निर्वाचन हँुदै छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत मङ्सिर २१ मा प्युठानमा निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा भएको खास सहमति के हो भने प्युठानबाट प्रतिनिधि सभाका लागि र बागलुङबाट प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र १ को ख बाट र निर्वाचन क्षेत्र २ को क बाट राजमोले उम्मेदवारी दिने । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाका लागि बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट र प्रदेश सभाका लागि बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र २ को क बाट र प्युठानबाट एउटामा उम्मेदवारी दिने । त्यसै गरी एमालेले प्रतिनिधि सभाका लागि बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट र प्रदेश सभाका लागि प्युठानबाट १ र बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र १ को ख बाट उम्मेदवारी दिने । त्यसरी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूलाई तिनै पार्टीकातर्फवाट एक–आपसमा सघाउने र जिताउने काममा खट्ने भन्ने सहमति भएको छ । त्यो सहमतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकातर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले, एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक भई सकेको छ । त्यसमा कुरा प्रष्टै छ नि, तालमेल गरिएको प्युठान र बागलुङमा मात्र हो, अन्यत्र होइन । अन्य जिल्लाबारे कुनै सहमति भएको छैन ।
० त्यो तालमेलमा जसरी सिटको वाँडफाड गरियो त्यो अलि न्यायसङ्गत र सम्मानजनक भएन भन्ने गुनासाहरू आई रहेका छन नि, यसबारेमा के भन्नु हुन्छ ?
– हेर्नुस्, आफूले एक्लै चुनाव जित्न सकिने भए कहीँ पनि कसैसँग कसैले तालमेल गर्दैन । अन्य पार्टीको सहयोग लिन परेपछि आफूलाई मात्र फाइदा खोजेर हुँदैन । फाइदा त दिनेले दिनु पर्‍यो नि । जहाँसम्म त्यो तालमेल न्यायसङ्गत र सम्मानजनक भएन कि भन्ने कुरा हो, त्यस्तो पटक्कै होइन । बागलुङ र प्युठानमा गरेर प्रतिनिधि सभाका लागि तीन वटा र प्रदेश सभाका छ वटा सिट हुन् । प्रतिनिधि सभाका लागि तीन सिटमध्ये तीन वटै पार्टीले एक–एक वटा र प्रदेश सभाका लागि छ सिटमध्ये दुई–दुई वटा बाडिएको छ । सबैलाइ बराबर छ नि । अनि, कसरी न्यायसङ्गत र सम्मानजनक भएन ?
० तालमेलमा तपाइहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र रोज्दा बागलुङ पनि त लिन सक्नु हुन्थ्यो होला नि । प्युठान नै रोज्नु पर्ने त्यस्तो कारण के थियो ?
–त्यस्तो छुट्टै कारण केही छैन । हाम्रा लागि बागलुङ, प्युठान दुवै एकै हुन् । त्यस्तो क्षेत्रीयतावादी सोचाइबाट हामीले कहिल्यै पनि हेर्दैनौँ । प्रतिनिधि सभामा बागलुङवाट गए नि, प्युठानबाट गए नि या अन्य हुनै जिल्लावाट गए नि त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि जाने हो । त्यो प्रतिनिधि डोटी, बझाङ या ताप्लेजुङको राजमोका नेता÷कार्यकर्ताका लागि पनि प्रतिनिधि हो । मेरै जिल्लाको, मेरै क्षेत्रको, मेरै गाउँको उम्मेदवार हुनु पर्छ भन्ने सोचाइ ठिक होइन ।
० तर तपाईहरूले सहमति गर्दा राजमोको साङ्गठनिक अवस्था हेरेरभन्दा पनि ‘परिवारवाद’ का आधारमा निर्णय लिनु भयो भन्ने गुनासा पनि आएका छन नि । त्यस्तो गुनासा गर्नेहरूको चित्त कसरी बुझाउनु हुन्छ ?
–त्यस्तो पटक्कै होइन । हामीले उम्मेवार बनाउदाखेरि निश्चित मापडण्ड र पद्धतिसङ्गत किसिमवाटै बनाएका छौँ । प्युठानवाट हाम्रो पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय हामीले पहिल्यै सार्वजनिक गरी सकेका थियौ । दुर्गा पौडेलको पार्टीभित्र लामो इतिहास छ । मोहनजीसँग विवाह हुनु अगाडि नै उहाँ अखिल नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्ष हुनु हुन्थ्यो । त्योभन्दा अघि विद्यार्थी र सांस्कृतिक मोर्चामा पनि रहेर काम गर्नु भएको थियो । २०५६ सालको निर्वाचनमा कपिलवस्तुवाट उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । त्यसपछि पनि उहाँले पार्टी सङ्गठनमा सक्रियतापूर्वक काम गर्दै आउनु भएको छ । यस अघि संविधान सभामा दुर्गा पौडेललाई राजमोकोतर्फबाट समानुपातिकबाट सभासद पनि बनाइएको थियो । अब मोहनजीको श्रीमती भएका कारणले उम्मेदवार बनाउनु हुँदैनथ्यो, त्यसरी बनाउदा परिवारवाद हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई कदापि सही मान्न सकिदैन ।
अन्य साङ्गठनिक इतिहास नहेरी विशुद्ध नाताकै कारणले कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिइन्छ भने निश्चित रूपमा त्यो नातावाद हुन्छ । तर दुर्गा पौडेलको सन्दर्भमा त्यसरी निर्णय लिइएको होइन । उहाँलाई मोहनजीको श्रीमती भएका आधारमा होइन, साङ्गठनिक जिम्मेवारी पुरा गर्दै पार्टी र क्रान्तिप्रति उहाँले पुर्‍याउनु भएको योगदानको मूल्याङ्कन गरेरै उम्मेदवार बनाइएको हो । पार्टीको प्युठान जिल्ला समितिले नै दुर्गा पौडेलको नाम पनि सिफारिस गरेको थियो ।पछि केन्द्रीय समितिले उहाँको नाम छनौट गर्‍यो । हाम्रो केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा उहाँ उम्मेदवार छनौट हुनु भएको हो । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो परिवारवाद चल्दैन । यदि चल्दो हो त मैले आफू नसक्ने भएपछि आफ्नै श्रीमती पार्वती केसीलाई बागलुङबाट उम्मेदवार बनाउन बल गर्थें होला, छोराछोरीहरूलाई उम्मेदवार खोज्थे होला । छोराछोरीले त स्थानीय स्तरमा लगातार काम गरी रहेका पनि छन् । त्यसैका आधारमा छोरी त विगतका कतिपय चुनावमा उम्मेदवार बनेकी पनि थिइन् । तर मेरी श्रीमतीलाई केका आधारमा उम्मेदवार बनाउने ? हो, उनले मेरो राजनैतिक जीवनमा घरभित्रबाट ठुलो सहयोग पुर्‍याएकी छिन् । मेरो स्याहारसुसार गरेर मलाई भात पकाएर खान दिई रहेकी छिन् । तर घर बाहिर निस्किएर पार्टीको अन्य कुनै जिम्मेवारी लिई त्यसलाई पुरा गर्ने काम उनीबाट भएको छैन । अब यस्तो अवस्थामा केरी श्रीमती भएका कारणले उनलाई मैले उम्मेदवार बनाउन खोज्ने ? अहँ, त्यस्तो हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो चल्दैन । भन्ने मान्छेले त के के भन्छन्, भन्छन् । त्यस्तो गुनासा गर्ने सबैको चित्त बुझाएर साध्य पनि हुँदैन । सत्य कुरा यही हो– हाम्रो पार्टीमा नातावाद, कृपावाद, क्षेत्रीयतावाद चल्दैन । दुर्गा पौडेल उम्मेदवार भएको पनि नातावादका आधारमा होइन, पार्टीमा उहाँले पुर्‍याउनु भएको योगदानको आधारमा हो । अन्तर्वार्ता÷नारायण शर्मा